Maxuu run ka yahay dilkii Derk Wiersum maxaase taasi micnaheedu tahay 'Markhaatigii adeerka'? : Martin Vrijland
Maxuu run ka yahay dilkii Derk Wiersum maxaase taasi micnaheedu tahay 'Markhaatigii adeerka'?
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 18 September 2019	• 26 Comments
In maqaalkani Waxaan sharxay sida afduubka Willem Holleeder Heineken iyo dilkii uu geystey ay u badan tahay PsyOps oo ay ahayd inay u diyaariyaan sharci u degsan mabda 'markhaatiga taajka'. Xallinta markhaatiga taajka ah (ee ay keentay Holleeder PsyOp?) Waxaa loola jeedaa in gobolku uu dacweyn karo qof kasta oo uu doonayo, sababtoo ah marqaatiga taajirka ahi xitaa wuxuu noqon karaa magac la'aan (iyada oo loo marayo nidaamka "marqaatiga qarsoodiga ah ee qatarta"). Weerarkan lagu qaaday "Derk Wiersum" wuxuu xaqiijin karaa in qareenka difaacaya uu hadda ka dib ficil ahaan ula dhaqmi karo ama uu geli karo barnaamijka ilaalinta. Markaa waxaa laga yaabaa inaad haysato marqaati qarsoon oo qarsoon, oo uu ilaaliyo qareen qarsoodi ah oo leh marag go aan xukun ku qaadasho. Marka la soo koobo: gobolka ayaa qof walba ka heli kara baararka isaga oo aan caddayn la hayn.
Taasi waa laga yaabaa inay tahay soo koobid aad u gaaban, laakiin mararka qaarkood bahalku waa inuu magacooda ku xuso. Goor hore maanta, waqtigeyga Facebook, waxaan isweydiiyay hadii Dirk Wiersum run ahaantii jiro ama hadii aan la macaamili laheyn dabeecad qoto dheer. Intaa waxaa u dheer, deriska iyo dadka aad isla garataan waa in sidoo kale lagu dhex faafiyaa isla teknolojiyadda (ku dheji wejiga lagu sameeyay AI oo duubista waqtiga dhabta ah oo la diyaariyo taariikh iyo astaamaha warbaahinta bulshada ee lagu abuuray barnaamijka qoto dheer). Ma u malaynaysaa inay taasi aad u fogaanayso? Waan fahamsanahay taas, laakiin teknolojiyaddan ayaa sii fogaaneysa oo wax kasta oo aan ku aragno muuqaal iyo cod waxay ka yimaadaan warbaahinta oo warbaahintaas waxay ku jirtaa gacmaha dadka sida John de Mol (bilyaneerka, milkiilaha ANP iyo Talpa). Saxaafadaasi waxay awood u leeyihiin inay soo saaraan warar been abuur ah. Dabcan ma jiraan wax caddeyn ah oo arrintaas ku saabsan. Si kastaba ha noqotee, fadlan akhri maqaalkani si lamid ah way fiicantahay in la ogaado waxa suurto gal ah.
Dabcan, jawaabaha warbaahinta bulshada waxaa sidoo kale lagu dhaqaajin karaa shucuur iyada oo loo marayo dhammaan noocyada (dhab ah ama qoto-dheer?) Xogta ka jawaab celisa faallooyinka sida: "In la yiraahdo wax sidan oo kale ah waa wax laga xumaado kuwa ehelka ah". Runtii waa wax fadeexad ah in la diido in qof dhinto haddii caddeyn adag la helo. Waxay noqon lahayd wax aad uga sii badan haddii aan runtii muddo tobannaan sano ah adeegsan lahayn PsyOps ayaa ciyaaray noqosho. Waxa aan sameeyo ayaa sare u qaadaya suurtagalnimada, aniga oo aan qaadan booska in tani runtii tahay kiiska.
Sikastaba ha noqotee, kiiskani wuxuu sifiican ugu habboon yahay Dhibaatada, Falcelinta, Xalka maxim, oo ah mushkilad is-abuuray iyo jawaabta kicisay, ayaa horseedaysa baaqa loogu talagalay sharci-adag. In sharcigan adag uu ku dhici karo isla dadkii ku baaqayay mustaqbalka si dhaqso leh ayaa lagu iloobaa dhamaan shucuurta iyo rabshadaha. Haddii dowladdu dhab ahaantii rabto inay hesho kalsoonida kasta oo ka dambaysa baararka, qof aan jirin ("markhaati adeer aan qarsoodi ahayn") ayaa bixin kara caddayn marag ah (ka eeg kiiska Holleeder ee quseeya go'aanka markhaatiga taajka). Garyaqaanka difaacaya qasab ma ahan inuu sii jiro (maxaa yeelay mustaqbalka waa qarsoodi) Cid kasta oo ka soo horjeedda nidaamka ayaa lagu qaadi karaa maskaxda ama lagu xidhi karaa maxkamad been ah.
Sida macmacaanka dusha sare ee macmacaanka waxaa jiri kara sharci suura gal ka dhigaya weerarada. Si kastaba ha noqotee, waa inaan si dhakhso ah u nadiifinno dhammaan hubka sariir hoostiisa ku leh dhammaan guryahaas ku yaal Amsterdam! Tani waxay noqon kartaa lagamana yaabo inay sidaas noqoto!
Qareenka toogashada Philippe Schol iyo warbixinta afduubka been abuurka ah ee Schiphol
DNA-ga xayawaanka Anne Faber ayaa u horseeday Michael Panhuis, laakiin wax badan soo daahay!
Maxuu run ka yahay weerarka dhimashada iyadoo ay ugu wacan tahay caruur agoon ah oo ku nool Assen?
Anja Schaap ayaa laga helay maraakiibta jarmalka oo ku dhintay badda? Miyuu suurtagal yahay sida waafaqsan sharciyada dabiiciga ah?
Tags: doodda, Derk Wiersma, Derk Wiersum, Dood, featured, khudbadda warbaahinta, isku day dil, dilay
18 September 2019 ee 21: 51
Haddii aadan raacin dhacdooyinkii hore (Fake) markaa waad rumeyn lahayd wararka maanta ee 18 Sept 2019.
Hap liq, diyaar, sidaa darteed waa inaad raacdaa (been abuur) wararka maxaa yeelay haddii kale ma fahmi doontid cabiraadaha ama cawaaqibka wararka beenta ah.
18 September 2019 ee 21: 53
Dadka iyo carruurta ayaa mar kale dhahaya,
Sideed u istaagi kartaa mawqifyo dhawr saacadood ka dib ah oo aad odhan karto waxay ku saabsan tahay xirfaddiisa, iyadoo aan BADBAADO weli la baarin?
Sidee qol labaad u odhan karaa isla markiiba, inkasta oo baadhitaan eber la sameeyay.
Maxaan u maqli weynay CPR
Qofna kama soo toosi ambalaasyada meedayna ahayd kooxda naxdinta leh. Maya, ma halkaasay joogeen?
Sidee derisku u maqli kari waayey toogasho halka wiil wadada dhinaceeda u sheegay warkii dhalinyarada in uu soo kiciyay tuugada.
Sidee ayaad madaxaaga ugu helaysaa si aad u muujiso carruurta sidan oo kale ah, waalidiinta miyaa la ogeysiiyay?
Iyo deriska sidee tahay inaad maqal wax rasaas ah.
Horaa ma u dhihi karaa in meeshu ur urin xoogaa ...
Wiil yar ayaa hurdada ka toosay, wadooyinka ka fog
Deriska waxba ma maqal ??
18 September 2019 ee 22: 28
Teknoolojiyad qoto dheer waxaad ku dhajin kartaa nin ilmo qaba garbaha oo waxaad saari kartaa weji aan jirin (laakiin macquul ah) wajigiisa (oo ay ku jirto codka la waafajiyey).
18 September 2019 ee 22: 57
Lugaha ciribtirida lugaha ayaa maskaxda galiya habka aqbalaadda (NLP hypnosis)
19 September 2019 ee 00: 32
Halkan ka daawo sida farsamadaani u shaqeyso:
19 September 2019 ee 08: 19
Runtii, fiidiyowga deriskaas ayaa laga yaabaa inuu wali been abuur yahay.
Sharaxaad yar, laakiin horay u soco.
Ninkii dambe ee bidix isagoo calooshaas weyn lugooda hore iyo gadaal u socday; ka dib hadhku mar kale waa xaq mar labaadna ma aha mar labaad, mararka qaar hoosku si fudud uma yaallo.
Deriska laftiisa; fiirso dhaqdhaqaaqa aan dabiiciga aheyn ee sunnayaasha
iyo waxa loogu yeero tuubada isha. Beenaale!
Sawir laydh gadaal ah iyadoo la adeegsanayo saamaynta lens-flare, ha ha, cufnaan rakhiis ah maxaa yeelay taasi waxay ka dhigan tahay nalku inuusan la mid ahayn jaakadda wiilka oo ay tahay inuu madaxa deriska ku hayo hadhka.
Wadada dhinaceeda dambe waa in ay ahaataa mid adag oo cadceedu muuqato.
Hooska vankaas ee darbiga ku yaal wuxuu leeyahay xagal khaldan haddii aad is barbar dhigto hooska bartaas.
Muuqaalka guud ee wajiga waa mid aad u fool xun, waa mid aad u waalan ereyada, AT5 waxay leedahay kaamirooyin sarreeya, laakiin ma ahan hadda, ha ha, waxay u egtahay mid aad u been badan.
Dabcan ma arkin taas taleefanka casriga ah, laakiin waxaad ku aragtaa kan ugu dambeeya laptop-ka ugu fiican haddii aad waxoogaa soo kordho.
18 September 2019 ee 21: 55
Dhageyso wareystaha. Hiddema wax baa la weydiiyaa, warbaahintu mar hore jawaab ayey leedahay.
Wareystaha wareystaha ah wuxuu dhahay: "Waa macquul in qareenka u doodaya marqaatiga marqaatiga ah uu aadi karo jasiirad aan la degin inta ka hartay noloshiisa."
Marka waa loo oggol yahay inaanu wali qarsoodi ahayn, warbaahinta ayaa horay u go'aamisay in jilaaga Hiddema kaasoo, sida uu sheegay, uu ka booday qoob-ka-ciyaarka (asaga oo markii dambe ka hadlaya wareysiga) waa inuu ka dhawaaqo The Hague, sida digaag awood leh.
daqiiqaddii 3; 37
18 September 2019 ee 22: 27
Oh haa iyo wax kale oo imanaya:
Waxaa naloogu yeeray inaanaan ku dhaqaaqin nafteena.
Goor dhaw 'is-camal fal' ayaa waliba horseedi karta ciqaab.
Patricia van Oosten ayaa qoray:
19 September 2019 ee 08: 41
Ku dar maraggaas cunuggaas hadda wuxuu kaloo iga dhigaa shaki. Waxaa laga waayaa dhamaan shucuurta dhabta ah. Ninkaas muuqaalka ah ee 'farsamada qaldanka' video-ga ee aad la wadaagto waa nooca cusub ee cilmi nafsiyeedka kuwaas oo u arka inay tahay wax aan caadi aheyn oo ah in dad badani aysan sii wadi doonin teknolojiyadda sidaas darteedna si joogto ah loo khiyaameyn doono. Badanaa laga bilaabo hal naadi oo ka mid ah fannaaniinta bidix-maskaxeed oo mar ay ku dhaawacmaan nooc ka mid ah caado-dhaqameedyada maalinta 8e dhalashada ka dib.
Hiddema (iyo Wiersma) sidoo kale waxay umuuqdaan inay arintan wax kaqabaan. Waxaa inbadan ii caddaatay in Hiddema ay tahay inay dadka u horseeddo (iyo baarlamaanka) dowlad booliis, halkaas oo sida ugu dhaqsaha badan waxa loogu yeero xaqiiqda ay wax u muujiyaan, wax walba waxaa loogu yeeri doonaa 'dambiile' oo lagu dhawaaqay sharci. Haddii ay taasi la socoto Baudet ama van Otten, dan kama galo. Dhacdo ahaan, ma fahmin inuu si sahal ah ugu xariiri karo jawiga moccro agagaarka shanladaha, 'dhammaantood' qori hoostiisa sariirtooda, dhammaan IQ hoose, wanaaggeyga runtii waa ujeedkeyga inaan ugu dambeyntii bilaabi karno dagaalkaas Muslimiin, sida muuqata umaysan sugi karin NWOkooda xarunta Israel.
Hoose hooseeya. Isku soo wada duuboo
19 September 2019 ee 13: 06
Ma Mocro Mafia runtii ma jirtaa mise waa tababarayaal AIVD sifiican u tababaran oo loo oggol yahay inay ku ciyaaraan Mocro Mafia?
19 September 2019 ee 14: 03
Dadaal yar ayaa la sameeyaa si loo qariyo xaqiiqda ah in Madurodam runtii tahay dowlad bilays, iskhilaafsan mar dambe ma ahan ereyga saxda ah. Junta waxay bilaabeysaa inay soo dhowaato, qareen qarsoodi ah, xaakin qarsoon ... xukun xukun diyaarsan
19 September 2019 ee 16: 55
Waxsoosaarka qumman ee Nice John .. laakiin warqadda ku jirta xirmooyinkaas waxay u muuqataa gabadh bikro ah. Tan waligeed lama sahamin. Soosaarka filimka quruxda badan ..
19 September 2019 ee 17: 24
Sababta dartood, waxaan iloownaa in noocyadaan soo saareed ee Hegelian ay yihiin dhiirrigelin lagu ilaaliyo ama magdhabayo xog-hayeyaasha gobolka, qareenka / saxafiga / marqaatiga taajirka ah xitaa sifiican. Bixinta lacagta ee cashuurta bixiyaha sidoo kale waa darawal muhiim ah halkan. Beenta ayaa xukunta
20 September 2019 ee 07: 25
Marka hore waxaan helnay maafiyada Holleeder; hada waxaan heysanaa Mocro ama nacromaffia oo ay wehliyaan Ridouan Taghi. Labaduba si cad ayey u yihiin AIVD PsyOp pawns oo loo oggol yahay inay doorkooda ka ciyaaraan maafiyada been abuurka ah. Dhammaanteed waxay ku dhaqmaysaa sidii loo hirgelin lahaa tallaabooyinka cusub ee booliisku u qaado booliska. Weerarka lagu qaaday dhismaha Telegraaf wuxuu ahaa mid been abuur ah; weerarkii lagu qaaday dhismaha Panorama wuxuu ahaa mid been abuur ah. Wax walba waa been abuur. Waxsoosaarka wararka been-abuurka ah ee warbaahinta iyadoo lala kaashanayo waaxda garsoorka. Ha ku dhex beerin dhexdeeda! Waa mushkiladda, falcelinta, ciyaarta xallinta ee gobolka ka bilaabidda tallaabada booliska gobolka tallaabo tallaabo ah!
20 September 2019 ee 09: 41
Oo haa, fiiri
Karel Reuterz ayaa qoray:
20 September 2019 ee 09: 26
Aad baad ugu mahadsantahay qoraalkan cad.
Mid ayaa u muuqda inuu uurjiifku inuu run yahay.
Laakiin sharaxaadadaada iyo sharaxaadaha taariikhda ee aan sharaxay waxaan ka helay sheekadaada
cod ka dhaadhicinta badan warbaahinta guud.
Ma jiraan wadooyin kale oo internetka ku jira oo la wadaaga fikirkaaga? Tani waa inay ku kacdaa feker ahaanteyda.
20 September 2019 ee 14: 14
Maya, ma jiraan wadooyin kale.
Dhamaan warbaahinta kale waa la hubiyaa ilaa iyo hada. Niburu.co, tusaale ahaan, waxaa maamula jacaylkii hore ee jacaylka Freddy Heiniken. Sidaa darteed isagu weligiis ma qori doono in afduubka uu ahaa mid qalalaase ah.
Warbaahinta kale ee la xakameeyay waxay isku dayaan inay sii ahaadaan diiradda 911; wax ka qor ufos iwm. marwalbana ka hadal kaliya calaamadaha ku dhaca (taas oo ka duwan mida 'PsyOp hoax').
21 September 2019 ee 16: 56
Grapperhaus miyuu runta sheegaa?
Boggan waxaa marar badan lagu soo bandhigay in weerarkii lagu qaaday dhismaha Telegraaf ee ku yaal aagga Basis weg been abuur ah iyo in weerarkii lagu qaaday dhismaha Panorama sidoo kale uu ahaa arrin gebi ahaanba la dejiyey. Bam-gacmeed loo adeegsado bam-gacmeed kaasoo ka tagaya waxyeelo badan oo ka badan waxyeelada la soo bandhigay oo uu jiro.
Haddii dhamaan kuwa (waxa loogu yeero) dambiilayaashu ay laxiriiraan taas (oo leh weerarada Fake) markaa waxaad dhihi kartaa Grapperhaus uma uusan qaban shaqadooda guriga si wanaagsan Parool ma uusan cadeyn waxa ka muuqday emaylkooda. Keliya wax bay yiraahdaan waxna way qabtaan annagana waxaan u baahanahay inaan dadkaas si dhab ah u qaadno.
Oo muxuu maqaalkaan ula wadaagi waayey, xorriyatul qawlka sidaas darteed waxaa gebi ahaanba baabi'iyey niman fadeexad leh sida John der Heuvel, waa inuu isagu ka xishoodo, BAH!
21 September 2019 ee 17: 44
Grapperhaus wuxuu ku mashquulsan yahay waxyaabo kale ..
21 September 2019 ee 17: 09
Cimilada xiisaha leh ee noocaan oo kale ah waa in ay aad u daneynayaan dambiilaha marka loo eego dhibbanaha (ma jiro wax kale oo ikhtiyaar ah maxaa yeelay si fiican haddii ay tahay hoax ……
Hadana wali ma jiro hal ra'yi oo ay bixiyeen booliska loo yaqaan booliisku, dhamaantood mala awaal
21 September 2019 ee 17: 47
waxaa laga yaabaa in VenJ iyo OM ay ka heleen talooyin xoogaa reerka zorregieta ah. Xitaa caddeyn dheeri ah oo ah in wax waliba la diyaariyey iyo in dadka aan loo dulqaadan karin, ka cabso in kiiskan loo soo bandhigo waxa ay u tahay sharuucda cusub. Crazy sida grapperhaus isla markiiba aan loo diyaarin 🙂
falanqeeyaan ayaa qoray:
24 September 2019 ee 15: 01
pablo escobar looma ogola inuu xirayo xargaha tagi ~ (haddii horeyba u jirtay), hal jilaa midba midka kale. Waa maxay show, waxay ku kici kartaa xoogaa!
24 September 2019 ee 20: 33
SIDEE AYUU KU SAMEEYAA?
Xukunka noocan oo kale ah, sida weerar lagu qaado nidaamka cadaaladda, wuxuu wiiqayaa ku dhaqanka sharciga iyo wixii la mid ah
iyadoo uusan jirin dambiile la xukumay, xitaa lama helin, tuhmana ma jiro, waxba ma jiraan iyo hadalada ceynkan oo kale ah.
Sababta ay u cambaareeysay Media, baaritaan leh kaliya seddex sawir oo dhibbanaha ah, oo leh fiidiyowyo cajiib ah oo 1 ah oo dhibbanaha ah.
Aaway qoyskii qareenka, sheekada oo dhami waxay qatar gelineysaa warbaahinta sababaha dartood
si kor loogu qaado awoodda soddon-iyo-saddexaad iyada oo aan wax macno ah loo samayn dambiile ah.
Aaway qareenadii NL ee raadinaya su'aashan riixaya, xaggee sharciga ka jiraa!
Sjon ayaa qoray:
28 September 2019 ee 17: 31
Waxyar ka dib weerarka, maqaal ayaa lagu dhajiyay khadka internetka kaas oo deris la sheegay in saacaddeediisa qaylodhaantu ay u baxday 07: 33, ka dibna ay maqashay rasaas ...
Dadka isticmaala hal kaniini sidoo kale waa in lagu daaweeyaa sida ku xusan Grapperhaus. Wax badan ayuu u leeyahay siyaasadda dulqaadashada Nederland… ..
Qareen cusub ayaa tan iyo markaas loo magacaabay, kaasoo sii ahaan doona qof aan la aqoon. Garsoorayaasha iyo xeer-ilaaliyeyaashu sidoo kale mustaqbalka lama oga. Haddii qof laga aamusiyo, waxa kaliya ee ay leeyihiin waa inay abuuraan hanjabaad inay ku tijaabiyaan qofkaas kiis maxkamad aan la garanaynin oo lagu tuuro xabsi ...
8 October 2019 ee 19: 18
Oh haa cabitaan raaxo leh ee Rode Hoed iyo la sheekaysiga garsoorayaasha iyo qareennada iyo dabcan xeer-ilaaliyeyaasha iyo qurxinta kale, waan naqaan
Xusuus-qorkani wuxuu muujinayaa ku filan khidmadda, xaddiga: "Muxuu 9 / 11 ee 2001 uga dhigan yahay amarrada adduunka, astaanta noocan oo kale ahi waa dilidda qareenka sababta oo ah ku-dhaqankiisa xirfadiisa ee amarka sharciga ee Nederland",
8 November 2019 ee 00: 14
Mar labaadna halkan ka arag joornaalka dacaayadda ah ee Nederland oo ah in buugga / lagana yaabo inaan la daabicin.
Mise buugga ayaa suuragal ah inuu kor u qaado xiisaha sheeko dhammaystiran, taasoo micnaheedu yahay wadarta guud ee khayaaliga.
Miyayna ahayn inaynaan dhowr sano sugin ilaa dadka sida fiican looga fikiray ee ka warqaba afduubka been abuurka ah ay noqdeen kuwa go'ay, oo markaas uun ay runtii daabici doonaan HOAX HEINEKEn,
HEINEKEN MARNA WUXUU KA SOO GUDBIN HADII AY UGU SAMEEATO GLASS-CLEAR L Cheers
« Ma waxaa jira dagaal u dhexeeya Mareykanka iyo Iran si dhakhso ah hadda?
Khudbadda UN-ka ee Greta Thunberg waa mid lagu xasuusto “dhallaanka laga tuuray walxaha lagu aruuriyo” khudradda dagaalka Ciraaq »
Guud ahaan Wadarta: 14.060.045
Nicky Verstappen Jos Brech waxay ku saabsantahay aqbalaadda xog uruurinta DNA-da ee la xiriirta DNA-daada internetka
Awoowe-weyn Greta Thunberg wuxuu isu beddelay waxsoosaarka aqalka dhirta lagu koriyo iyo yareynta dadka iyadoo la adeegsanayo eugenics
Qormada UN-ka ee '90' waxay muujineysaa: Tallaabooyinka cimilada ee loo sameeyay si loo meel mariyo dowladda adduunka
Mindsupply op Nicky Verstappen Jos Brech waxay ku saabsantahay aqbalaadda xog uruurinta DNA-da ee la xiriirta DNA-daada internetka
Martin Vrijland op Nicky Verstappen Jos Brech waxay ku saabsantahay aqbalaadda xog uruurinta DNA-da ee la xiriirta DNA-daada internetka
SalmonInClick op Nicky Verstappen Jos Brech waxay ku saabsantahay aqbalaadda xog uruurinta DNA-da ee la xiriirta DNA-daada internetka
Ku biir 1.685 macaamiisha kale